Masinina fanamarihana arabe Factory | China Road marika manamarika mpanamboatra, mpamatsy
Masinina remover manisy marika amin'ny lalana thermoplastic
Ny milina Thermoplastic Marking Paint Remover Machine dia ampiasaina hanalana sy hanadiovana ireo fako taloha talohan'ny fanamarihana loko thermoplastic.
Ny motera dia mitondra ny lohan'ny fikolokoloana haingana. Ny lohan'ny fikosoham-bary dia manala ny velaran-tany misy convex eo ambanin'ny fiantraikan'ny hery sentrifugal, ary mamafa ny tsipika fanamarihana.
Ny fitaovana dia misy ny fahaizan'ny vokan'ny fanesorana tena tsara, ny hafainganana haingana ary ny fikojakojana sy fikojakojana tena tsotra.
Masinina fanadiovana sy fanapoahana arabe
Ny milina fanadiovana dia tsy vitan'ny manala tanteraka ny vovoka, fotaka ary simenitra eny ambonin'ny arabe, fa afaka manatsara ny kalitaon'ny fanamboarana ihany koa. Ny milina mitsoka dia ampiasaina mba hanesorana ireo vato vita amin'ny arabe, loto ary vovoka mitsingevana aorian'ny fanadiovana. Ny milina fanadiovana sy fanapoahana arabe dia iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny fanampiana ny fanamboaran-dàlana.
Milina fanamarihana lalana mandeha ho azy / mandeha ho azy miaraka amin'ny fiara / kamio / fiara
Ny milina fanamarihana thermoplastic mandeha ho azy dia iray amin'ireo fitaovana lehibe indrindra amin'ny fananganana tsipika fanamafisam-peo mafana na mafana. Tsotra amin'ny firafitra ity vokatra ity, malefaka amin'ny fandidiana ary mitsitsy asa amin'ny fanamboarana, indrindra ho an'ny fiampitana zebra, izay mora ampiharina ihany koa. Mazava ho azy fa ambony noho ny vokatra mitovy aminy izy io, ary ampiarahina amin'ny bench-benchmark mba hiatrehana ny famerenana haingana ny tsipika momba ny lalana sarotra sy ny tsipika fanamarihana tsy ara-dalàna.
Masinina fanamarihana lalana thermoplastic amin'ny tanana
Ny milina fanoratana lalana thermoplastic manosika tanana dia iray amin'ireo fitaovana lehibe indrindra amin'ny fananganana tsipika mari-panafana thermoplastic na mafana.
Tsotra amin'ny firafitra ity vokatra ity, malefaka amin'ny fandidiana ary mitsitsy asa amin'ny fanamboarana, indrindra ho an'ny fiampitana zebra, izay mora ampiharina ihany koa. Mazava ho azy fa ambony noho ny vokatra mitovy aminy izy io, ary ampiarahina amin'ny bench-benchmark mba hiatrehana ny famerenana haingana ny tsipika momba ny lalana sarotra sy ny tsipika fanamarihana tsy ara-dalàna.
1200kgDobohoro thermoplastic Preheater YF10001200
Voalohany indrindra, ny ampahany amin'ny loko dia ampidirina ao anaty kettle mafana miempo handefasana. Rehefa mahatratra 180-200 ℃ ny mari-pana, aforeto ny valizy miverimberina mba hampifangaroana ary ampio hatrany ny loko vaovao amin'ny fanjakana mikoriana. Rehefa mahatratra 210 ℃ ny mari-pana amin'ny loko, apetraka ao anaty masinina fanaovana marika amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo famoahana ny loko
Ny preheater thermoplastic thermoplastic roa-solika sy solika dia nohatsaraina amin'ny alàlan'ny preheater thermoplastic thermoplastic. Ireo fitaovana dia mampiasa fatana manokana misy solika sy entona manokana, izay manana hafainganam-pandeha haingana sy haingana be, indrindra rehefa mampiasa gazoala ho solika. Manam-potoana, tsy mila mandany fotoana amin'ny famenoana solika; any amin'ny faritra be tendrombohitra sy faritra be lembalemba, ambany ny atin'ny ôksizenina amin'ny rivotra, ny diesel satria ny solika dia miharihary fa manararaotra kokoa noho ny gazy liquefied, mampihena ny vidin'ny fananganana, amin'ny maha-preheater thermoplastic vaovao azy, no safidin'ny ekipa mpanao voalohany.
1. Fomba fampiasana amin'ny ankapobeny: voalohany, manomàna diesel, menaka maotera, menaka hydraulic ary rano (ho an'ny rano mangatsiaka). Manaova fiomanana amin'ny fisorohana sy fiarovana amin'ny afo, ary zahao sy amboary ny fitaovan'ny rafitra mba hahazoana antoka fa tsara izany. Aorian'ny fanombohana ny motera diesel tsy misy enta-mavesatra dia alefaso tsikelikely amin'ny 5-6mpa (tsy mihoatra ny 8Mpa), arotsaho ao anaty kettle mafana miempo ny hafanana mba hafanaina sy hiempo. Rehefa mahatratra 100 ~ 150 ℃ ny maripana fanosotra, atombohy ny mixer amin'ny fampifangaroana ary ampio tsy tapaka ny takelaka vaovao amin'ny fanjakana mikoriana, ary ny habetsaky ny firakotra nampiana dia latsaky ny 4/5 an'ny fahaizan'ny kettle. Rehefa mahatratra 180 ~ 210 ℃ ny mari-pana mifono ao anaty siny, dia ao anaty fanjakana mikoriana ilay izy, apetraho ao anaty masinina fanaovana marika ny loko mandoko amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo famoahana marika. Ny fepetra famahanana sy famoahana dia hofaritana araka ny habetsany, ny fotoana fananganana ary ny toetrandro. Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny fitaovana dia hampiasaina amin'ny faran'ny fanamboarana.
2. Alohan'ny hampiasana sy mandritra ny fikojakojana: alao antoka fa tsy tafaporitsaka na voasakana ny rafitra hydraulic; Zahao ny rafitry ny gazy raha misy fivoahana na fanakanana; Hamarino tsara fa tsy voasakana ny nobela na lehibe loatra ny lavaka vent. Aorian'ny fandrehitra dia ahitsy ny lelafo ho manga; Ny fanaraha-maso valizy gazy dia mandaitra.
3. Soloy ny diloilo hydraulic rehetra ao amin'ny fitoeran-tsolika hydraulic aorian'ny dimy na enina andro aorian'ny fampiasana voalohany dia ovao fanindroany ny solika isam-bolana aorian'izay, ary zahao matetika sy diovy ny sivana amin'ny fitoeran-tsolika solika.
4. Famerenana matetika sy fitazonana ny motera diesel.
Ny preheater thermoplastic dia iray amin'ireo fitaovana lehibe amin'ny fanamboarana ny fanamarihana ny arabe. Amin'ny dingan'ny fanamarihana tsipika, ny dingana voalohany dia ny manafana sy manaitra ny loko vovoka ao anaty preheater mandra-pivadika ho loko ranon-javatra, avy eo araraka ny loko ao amin'ireo masinina fanaovana marika. Satria ny haavon'ny fandokoana ny loko dia misy ifandraisany amin'ny kalitaon'ny tsipika fanamarihana, ny preheater dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ireo fitaovana fanamarihana thermoplastic ary ampahany tena ilaina amin'ny loko mandoko.